निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरण : केसीको यो कस्तो नाटक ? | My News Nepal
निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरण : केसीको यो कस्तो नाटक ?
कुमार भण्डारी २०७५ भदौ २७ गते
काठमाडौं । साउन १० गते गते हराएकी कञ्चनपुर भिमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको ११ गते उखुबारीमा लाश फेला प-यो । प्रहरीले पनि उनको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष निकाल्यो । तर, लामा समयसम्म पनि अपराधिलाई पक्राउ गर्न सकेन । अन्ततः झण्डै एक महिनाको लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले भदौ ४ गते ४१ वर्षीय दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गर्यो ।
तर, स्थानीयवासी मुख्य दोषी पत्ता लगाउन छोडेर प्रहरीले नक्कली अभियुक्त बनाएको भन्दै विरोध गरे । भदौ ७ गते बिहिबार प्रहरीले १० राउन्ड गोली चलायो । गोली लागि ३ जना गम्भीर घाइते भए भने थप १० जना सामान्य घाइते भए ।
त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले ७ गते नै सह–सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्यो । सोही दिन नै
गृह मन्त्रालयले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई फिर्ता गर्यो ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको छानबिन गर्न र प्रहरीको अनुसन्धानबारे पनि अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएसँगै मन्त्रालयले सिडिओ कुमारबहादुर खड्का र एसपी डिल्लीराज विष्टलाई फिर्ता बोलायो र तारानाथ अधिकारीलाई नयाँ सिडिओ तथा कञ्चनपुरको प्रहरी प्रमुखमा कुवेर कठायतलाई पठायो ।
प्रहरीले भदौ ८ गते पनि गोली चलायो । जहाँ भीमदत्तनगरपालिका–१८ का १४ वर्षीय सनी खुनाको मृत्यु समेत भयो भने कञ्चनपुरबासीले झण्डै एक साता त कफ्र्यूको नै सामना गर्नुप¥यो ।
त्यसपछि प्रहरीले निर्मलाकी साथी भनिएकी रोशनी बम र उनकी दिदी बबिता बमलाई पक्राउ ग-यो । त्यसबाट पनि प्रहरीले खासै सफलता पाउन सकेन । छानविन गर्न गठित समितिले पनि अनुसन्धान सकेको र प्रतिवेदन तयार पार्न समय थप गर्नुपर्ने माग गरे गरेपछि सरकारले २४ गते आईतबार पुनः १५ दिन म्याद थप ग¥यो ।
हुनत बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा स‌ंलग्न भनी पक्राउ परेका दीलिपसिंह विष्ट डिएनए मेल नखाएपछि मंगलबार रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत कंचनपुरले विष्टको संलग्नता पुष्टि गर्ने आधार नभएको भन्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेपछि उनी छुटेका हुन्। २१ दिन थुनामा बसेपछि विष्ट साधारण तारेखमा रिहा भएका हुन्।
स्थानीयको प्रदर्शनपछि नियन्त्रणमा लिइएका बम दिदीबहिन पनि रिहा भएका छन्। निर्मलाकी साथी भनिएकी रोशनी बम र उनकी दिदी बबिता बम सरकारी वकिलको हाजिरी जवानीमा रिहा भएकाको कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख कुवेर कडायतले बताए। रोशनी बम साधारण तारेखमा रिहा भएकी छन् हुन् भने उनकी दिदी बबिता बम ३० हजार धरौटीमा रिहा भएकी छन्।
तर, सोही घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित समितिका एक सदस्यले भने अहिले आएर नाटक मञ्चन गरेका छन् । आफूमाथि सुरक्षाको माग राख्दै २५ गते सोमबार राजीनामा दिएका उपसचिव वीरेन्द्र केसी आजबाट पुनः समितिमा फर्किएपछि कतै उनले नाटक गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले समितिको म्याद थप गरिएको र आफूमाथि नै सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै राजिनामा दिएका थिए ।
उनले आज (बधुबार) प्रेस विज्ञाप्ति जारी गर्दै काममा फर्कने बताएका हुन्। उनले बुधबार छानबिन समितिका संयोजकसहित भएको छलफलबाट वास्तविक दोषी पत्ता लगाउने सम्बन्धी मन्त्रालय र आफ्नो उद्देश्यमा एक मत भएकाले पुनः छानबिन कार्यमा फर्कने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
उपसचिव केसीले सोमबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी ‘जघन्य अपराधको विरुद्धमा उभिई निर्मलाको आत्मालाई र निजको परिवारलाई समितिको सदस्यका रूपमा न्याय दिन असम्भव देखेको’ र ‘शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा हत्या गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको’ भन्दै राजीनामा गरेका थिए।
त्यसैले पनि उनीमाथि नै शंका उब्जिएको हो । आफ्नो चर्चाका लागि राजिनामा दिएका हुन् कि उनीमाथि साँच्चिकै सुरक्षा थ्रेट आएको हो ? त्यो भने त समयले नै बताउने छ । उनले देखाएको यो चर्तिकलले कतै उनले प्रभाव र दबाबमा आएर राजीनामा दिएको र अहिले फेरि फर्किएका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हुनत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि मंगलबार राजिनामा दिएका सदस्य केसीमाथि नै छानविन हुने बताएका थिए ।